★မြန်မာ့အလင်း★: မိုဟာမက်နဲ့ အမျိုးတော်သူ ဆော်ဒီအမျိုးသမီးက Quran ကိုမီးရှို့ပျော်ပွဲခံခြင်း
မိုဟာမက်နဲ့ အမျိုးတော်သူ ဆော်ဒီအမျိုးသမီးက Quran ကိုမီးရှို့ပျော်ပွဲခံခြင်း
ဒီတစ်ယောက်ကတော့ တကယ်ကို သတ္တိရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်မလေးပါ။ စာဖတ်တတ်တဲ့ မိန်းမတိုင်း မွတ်ဆလင်လူရမ်းကားဝါဒကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာ sebafarsi ကိုယ်တိုင် အရက်သောက်ပြီး ဆော်ဒီအလံနဲ့Quran ကို မီးရှို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်အကြောင်းမလေ့လာဖူးတဲ့ မြန်မာတွေက စာအုပ်ကလေးမီးရှို့တယ်လို့ပဲ မြင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အမြင်မှာ အဆင့်မြင့်ဆုံး ဆော်ကားချက်တစ်ခုလို့ ယူဆပါတယ်။ Quran ကို မီးရှို့ရင် သူတို့လုံးဝမခံနိုင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာတွေကို မီးရှို့ပြီး ဆော်ကားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက သူများနိုင်ငံအလံတွေကို မီးရှို့ပြီး ဆန္ဒပြတာ ရိုးရိုးမထင်ပါနဲ့ ဆော်ကားချက်တစ်ခုပါ။ အခုအချိန်မှာ Quran ကျမ်းစာကို မီးရှို့တဲလုပ်ရပ်ဟာ မွတ်ဆလင် မိန်းမတွေအကြားမှာ တိုးပွားလာပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မွတ်ဆလင်တွေ ၀တ်လည်တဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ မွတ်ဆလင်မိန်းမတွေကလဲ မွတ်ဆလင်က ထွက်ရင် ရိုးရိုးမထွက်ပါဘူး။ Quran ကို မီးရှို့ပြာချပြီး တနည်းပြောရရင် ဆော်ကားပြီးမှ ထွက်ကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာကို ဘယ်လောက် နာကျည်းလဲဆိုတာ မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ မူရင်းစားကိုကြည့်လိုရင် ဒီမှာ Click လုပ်ပါ။
my mame is Seba hussain abdulrahman Farsi.
my mom's name is Taibah mohammed ali al shareef al edrisi.
she's the sub principal of the education and growing in medina.
she's decsendent inablood line of prophet mohammed (the biggest wolf inasheep clothing ..the biggest evil criminal in the human history).
...i had many questions in my head ..and going deeply into islam means more questions and no answer..
i Reject islam after Very Very Long Deep thinking and analysis.
it's So Painful to be Agnostic but i prefer to Suffer from truth than fool my self and live Blindly... (ကုလားထီးတွေ ဒီမိန်းမချေးကို စားသင့်တယ်)
...at the end the whole story was BAD LUCK !
i didn't choose to born in k.s.a between those RICH ANIMALS.
i didn't choose even my existence in this painful life.
and i don't think any body did !
i don't blame any one ..cos from higher consciousness i can see the mystery behind all what happened to me in my life.
and i don't feel any spite or revenge or hate which i think any one else instead of me out of ignorance will do.
actually am so grateful cos that happened to me ..helps me to see clearly ..understand my self ..and find my way!
i memorised quran when i wasakid... and i did that vedio to say... i just burn it from my heart.
Hometown: saudia arabia,midena
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:07 AM